तीजलाई लिएर कास्की प्रशासनद्वारा जारी सूचनाले उत्पन्न गरेको तरंगले फेवाताल छछल्कियो (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
तीजलाई लिएर कास्की प्रशासनद्वारा जारी सूचनाले उत्पन्न गरेको तरंगले फेवाताल छछल्कियो (भिडियो)
१. तीजलाई लिएर कास्की प्रशासनद्वारा जारी सूचनाले उत्पन्न गरेको तरंगले फेवाताल छछल्कियो
पोखरा । तीज हिन्दू नेपाली नारीहरुको अगाध आस्था जोडिएको चाड हो । चेली माइतीको मिलनको विन्दू बनेको तीज चेली माइतीको संगमको आध्यात्मिक अध्याय पनि हो । यसपटकको तीज पनि नजिकिदैछ तर तीज नजिकिदै गर्दा कास्की प्रशासनले निकालेको सूचनालाई लिएर भने सर्वत्र विरोध भएको छ । तीज भड्किलो बन्दै गयो, तीज महंगिदै गयो, तीज फेशनेबल बन्दै गयो भन्ने गुनासो यही समाजमा नउठेको होइन पनि ।
तर तीजको महत्व र सान्द्धर्भिकता अहिले पनि उही छ, तीज अझै पनि छुटिएका चेली माइतीको मिलनको आधार नै बनेको छ । भनिन्छ छुटिएका नदीहरुको मिलन सागरमा मात्र हुन्छन रे यस्तै हो एकै घरमा जन्मिएका छोरीहरुको कथा पनि । उनीहरुको मिलनको सागर अर्थात त्यही माइती नै हो जुन घरमा जन्मे, जुन घरमा हुर्के र माइतीले पराईघरमा नपठाए सम्म रमे पनि ।
तर यही चाडको मर्ममाथि प्रहार गर्नेमाथि कास्की प्रशासनले जारी गरेको सूचनाले अहिले पोखराको सबै क्षेत्र आन्दोलित बनेको छ । आन्दोलित बनेपछि कास्की प्रशासनले पनि आफ्नो सूचनालाई सच्याउन बाध्य बन्यो, जस्ले पोखरेली चेलीहरु तीज मनाउन स्वतन्त्र बनेका छन् ।
२. सेनेटरी प्याड अब गाउँघरका महिलाले आफ्नो लागि मात्र नभई अन्यका लागि पनि आफै बनाउन थाले
सेनेटरी प्याड अहिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा वहस र चर्चाको विषय बनेको छ । एक समय कुरा गर्न पनि लजाउनु र धक मान्नु पर्ने अवस्था थियो, यस्को बारेमा । विद्यालय पढ्दै गरेका छात्राहरुले पढाई नै छाड्नु पर्ने, महंगो पर्ने भएकोले कतिपयले किन्नै नसक्ने, किने पनि विभिन्न किसिमको केमिललको प्रयोग भएको प्याड प्रयोग गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्ने लगायतको समस्या महिला तथा किशोरीहरुमा थियो ।
तर, खुल्दै गएको समाजमा अब यो लुकाउने विषय रहेन भने महिला तथा किशोरीहरु स्वयः यस विषयमा खुलेर छलफल गर्ने भएका छन् पनि । त्यसमाथि देशभर विद्यालयहरुले विद्यालयमा नै सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्दा छात्राहरुले पढाई छाडनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।
त्यसमाथि अहिले महिलाहरु गाउँघरमा नै बसेर स्वयं सेनेटरी प्याड बनाउन सक्ने भएपछि यस्ले उनीहरुको आयआर्जनमा मात्र वृद्धि भएको छैन, स्वास्थ्यमा देखिने समस्या पनि हटेको छ ।